Tag: solomo | Martech Zone
Celceliska xayeysiiska moobiilka ee lagu gaarayo 1,000 isticmaaleyaasha iPhone waa $ 2.85… ma ahan CPM xun marka kuwa kale ee dhexdhexaadiyeyaasha ah ay ku dhuftaan tiro intaas ka badan. Ma aha in la xuso in dadka isticmaala moobiilku ay inta badan wax iibsanayaan oo ay diyaar u yihiin inay iibsadaan. Laakiin muuqaalka xayaysiinta moobiilku waa mid ballaadhan oo aad u jahwareersan. Waxaa jira daraasiin ah xayeysiisyada moobiilka ee xayeysiinta ah iyo boqolaal dariiq oo aad ku gaari karto isticmaale mobiil - laga bilaabo xayeysiisyada, xayeysiisyada bulshada, emaylka iyo wixii intaa ka badan. Gelinta
Suuqgeynta Bulsheed Waxay U Baahan Tahay Mobile Feker
Axad, Oktoobar 13, 2013 Douglas Karr
Suuqgeyaashu badanaa waxay ka fikiraan baraha bulshada inay yihiin wadiiqo kale oo lagu dhiirrigeliyo ama lagu xayeysiiyo wax soo saarkooda iyo adeegyadooda. Waxa aysan inta badan aqoonsaneyn waa awooda looga faa’iideysto baraha bulshada inay tahay kanaal is dhexgal ah oo bixiya jawaab celin isla markaana soo celin kara dadaalladaada suuqgeynta Ganacsatada Smart-ka ah ayaa durbaba ka faa'iideysanaya waxyaabaha dabiiciga ah iyo istaraatiijiyadaha xayeysiinta ah ee la bixiyo si ay u gaaraan dadka isticmaala mobilada Xayeysiinta moobiilku waa 41% dakhliga Facebook halka Facebook uu 16% ka yahay suuq geynta adduunka oo dhan
Buzzwords Suuqgeyne ka Mashable
Dadka kuxiran Mashable waxay isku keeneen xogtan 30 maalmood ee Suuqgeynta Buzzwords. Sida nin aan u adkaysan karin suuqgeynta hadalka, marwalba waan ku qanacsanahay markaan si fiican u eegeyno suuqgeynta BS. Daacad baan noqon doonaa, in kastoo, oo aan qirto inaan u maleynayo in muuqaalkan muuqaalku ka buuxi karo uun. Shuruudaha sida suuqgeynta agile, infographic iyo gamification ma aha suuq geynta buzzwords, waa ereyo dhab ah oo suuq kasta u baahan yahay inuu si buuxda u fahmo. Iyo kan ugu weyn
Tilmaamaha Tafaariiqda ee SoLoMo
Khamiista, Noofembar 1, 2012 Arbacada, Oktoobar 31, 2012 Douglas Karr
Bulsho, Degmo, Moobil Naanaysta taas ayaa ah SoLoMo waana istiraatiijiyad xaqiijinaysa koboc badan oo dhinaca warshadaha ah. Bulshadu waxay ku socodsiisaa taraafikada iyada oo loo marayo dhiirrigelinta iyo wadaagista, ficillada wadayaasha maxalliga ah inta isticmaaleyaashu ka raadinayaan dukaamada tafaariiqda ee gobolkooda, moobiilkuna wuxuu wadaa go'aanka iibka gudaha iyo dibedda tafaariiqda In kasta oo heerarka tafaariiqda tafaariiqdu u hooseeyaan kuwa isticmaala taleefannada casriga ah, tirakoobyadani ma sheegaan sheekada oo dhan, maaddaama qalabka moobiilku si aad ah u saameynayo